USD / JPY Ny fitsapana mafy fanandramana amin'ny 108.10 aorian'ny fananganana fonosana stimulus japoney iray $ $ | Robots sy famantarana forex automated
Home » Fanadihadiana ara-teknikan'ny tsena Forex »USD / JPY Fanandramana lakile fitsapana mafy amin'ny 108.10 Manaraka Fampandrenesana famenonam-bola japoney iray $ 1
Ny fanoherana ny fanalahidin'ny USD / JPY amin'ny 108.10 aorian'ny fonosana fanentanana $ 1 + $ Japoney iray
27.05.2020 Admin 0 Fanadihadiana ara-teknikan'ny tsena Forex,
Nandritra ny fotoam-pitsarana asiany androany, nankatoavin'ny praiminisitra Jeneraly Shinzo Abe sy ny kabinetrany ny iray hafa ¥ 117T (USD $ 1.1T) fonosana famporisihana ao anatin'izany ny fanampiana fanampiana amin'ny orinasa handoa hofan-trano, fanampiana ara-bola ho an'ireo orinasa miady, fanohanana ny toekarena eo an-toerana, ary fanampiana ara-pahasalamana. Ity fifanarahana ity dia mifanentana amin'ny fonosana fampiroboroboana ny firenena nanomboka ny volana aprily, ka mampihena ny fitambaran'ny fitambaran-javatra 40% amin'ny harinkarena GDP ao Japana rehefa manandrana hametra ny fahatapaham-bola maharitra ny firenena amin'ny fiandrasana ny -20% + GDP amin'ity am-bolana ity.
Amin'ny inona no lasa valinteny mahazatra amin'ny fepetra manaitaitra goavana ao Japana. Ny mpivarotra FX ny ankamaroany dia nanala ny fivoarana ho "bebe kokoa" avy amin'ny firenena mandroso be mpiahy indrindra indrindra eran-tany. Raha ny fanoratana, ny USD / JPY dia somary mivarotra kely ny andro hamerenany ny fanoherana fototra amin'ny halavany 6-herinandro eo ho eo amin'ny 108.00:
- dokambarotra -
Loharano: TradingView, Renivohitra GAIN
Araka ny asehon'ilay tabilao etsy ambony, ny haavon'ny 108.10 dia maneho ny "tsipika amin'ny tendro" modely misy loha sy soroka mikorontana. Ho an'ny tsy voatanisa dia ity modely ity dia mampiseho tetezamita avy amin'ny takelaka boky (ambaratonga ambany ary ambany ambany) mankany amin'ny fiakarana ambony (avo lenta sy avo lenta) ary matetika hita any amin'ireo tsipika lehibe eo amin'ny tsena.
Izany dia nilaza, ny modely tsy hohamafisina mandra-pahatongan'ny / raha tsy hoe hihena ny tahan'ny tahan'ny 108.10. Raha hitantsika fa ny fisondrotan'ny vidin-javatra, ny mpamaky dia mety handinika ireo varotra fifampiraharahana, miaraka amin'ny mety hisian'ny fihetsiketsehana "refesina" hatramin'ny 110.00, fa ny voalohandohan'ny volana aprily ambony amin'ny 109.35 (tsy aseho) dia mety ho fanoherana ihany koa. Amin'ny lafiny iray, ny fihenan'ny ambanin'ny zoma ambany amin'ny 107.35 dia hanafoana ny fananganana ary manondro ny fihenan'ny lalindalina kokoa amin'ny 106.00-ambaratonga ambany na ambany.
Previous: Ny fangatahana findramam-bola avy amin'ny tompon-trano dia mampiseho tsy fahombiazana haingana sy haingana, satria ny fangatahana dia mitombo ny 9% hatramin'ny herintaona
Next: Manana virus ve ny stock stock 'nateraky ny' stock?